Klever Ezezimali | Global Crypto News
Landela imakethe ye-crypto nge Klever Izindaba.
I-Solana (SOL) iyi-blockchain yomphakathi, evulekile esekela izinkontileka ezihlakaniphile, okuhlanganisa amathokheni angenawo ama-fungible (NFTs). Isebenza njenge-blockchain eyakhiwe ukuze ikwazi ukukala...
Kukhona impendulo elula kulo mbuzo, cha. U-Doge no-Shiba Inu bahluke ngezindlela eziningi, ngakho-ke nansi incazelo encane ...
Icala le-Terra (LUNA) lisikhumbuza ukuthi sifunde ngezingozi ze-crypto-market
Kunezinto ezithile empilweni esingeke sazichaza kahle ukuthi kungani zenzeka noma kanjani kwasekuqaleni. Nokho, sithatha izifundo ku...
Faka imali kusenesikhathi kumaphrojekthi we-crypto
Nsuku zonke kwethulwa amaphrojekthi amasha e-crypto futhi abantu bayatshala kuwo, kodwa ingabe uyazi ngempela ukuthi imaphi amaphrojekthi we-crypto okufanele ukhethe...
Funda indlela yokufaka i-MATIC ku- Klever Wallet
Onjiniyela bebelokhu bedala izimo ezinhle zokusebenzisa amaphrojekthi we-blockchain eminyakeni yamuva nje, okubonakala sengathi kuncane kakhulu iziphakamiso ezenziwe nguSatoshi Nakamoto ...
Klever Iphephabhuku lamasonto onke - May 20
Klever Bukhoma: UMisha Lederman usongamela iNhloko Yokuthuthukiswa Kwebhizinisi kaTravala uShane Sibley Hlola Klever & Ubambiswano lweTravala, ukuhlanganiswa kwe-K5, nokunye... Umsingathi wethu uMisha...
Ukuhwebelana ngamapheya e-CHZ kuvuliwe Klever Exchange
I-Chiliz (CHZ) iyi-cryptocurrency egxile kakhulu embonini yezemidlalo nezokuzijabulisa. Banikeza i-Socios, inkundla yokuzijabulisa yezemidlalo esekwe ku-blockchain. Njenge-crypto...
Umuntu angangitshela ukuthi ngingayithenga kuphi i-cryptocurrency?
Umhlaba wonke kancane kancane ubamba umlilo we-cryptocurrency kanye namacala ayo okusebenzisa okungenzeka. Kuyaduma kuzo zonke izinkundla zokuxhumana nge...
Klever Shintshanisa uhlu I-Sandbox (SAND)
ISANDLA/USDTSAND/KLVI-SAND/ETH Trading iyaqhubeka bukhoma Klever Shintshanisa amasheya 19 Meyi 2022 ngo-8 PM (UTC). Yini I-Sandbox (SAND)? I-Sandbox iyi-blockchain-based...
Yini ongayenza nge-AVA ku Klever Isikhwama semali?
Kunamaphrojekthi amaningi athuthukiswayo nsuku zonke, okukhombisa ukuthi abathuthukisi empeleni bacabanga futhi bafuna izindlela ezingcono kakhulu zokuxazulula...
Ungayithenga kanjani i-Bitcoin ngekhadi lesikweletu eNdiya?
Umholi wama-cryptocurrencies, i-Bitcoin (BTC) ebishayela imakethe ye-crypto kusukela yethulwa ngo-2009 isiphenduke into okumele ibanjwe yibo bonke...
Klever Izinhlu zokushintshanisa i-Decentraland (MANA)
MANA/USDTMANA/KLVI-MANA/ETH Trading iyaqhubeka Klever Shintshanisa amasheya Meyi 18, 2022 ngo-8 PM (UTC). Yini i-Decentraland (MANA)? I-Decentraland yakhelwe abadali bokuqukethwe,...
«Langaphambilini ikhasi1 ikhasi2 ikhasi3 ... ikhasi53 Okulandelayo »
Uhlamvu Lwemali Lwesonto (8)
I-Flash News (14)
I-Hardware Wallet (2)
Ukuvuselelwa Kwemakethe (47)
Uhlamvu lwemali Lweviki: I-Ethereum (ETH)
I-Ethereum iwumthombo ovulekile, uhlelo lwe-blockchain olunwetshiwe olune-cryptocurrency yalo. Ngaphezu kokusebenza njengenkundla yama-cryptocurrencies amaningi, i-ETH iphinde inikeze amandla...
Uhlamvu Lwemali Lweviki: Tron (TRX)
Iyini i-Tron (TRX)? I-Tron iyisistimu yokusebenza esekelwe ku-blockchain eyenzelwe ukwenza lobu buchwepheshe bufanele ukusetshenziswa kwansuku zonke. UTron uthi inethiwekhi yakhe ine...
Uhlamvu lwemali Lweviki: Uniswap (UNI)
Yini i-Uniswap (UNI)? Iphrothokholi ye-Uniswap isiza ukuhweba okuzenzakalelayo kwamathokheni e-decentralized finance (DeFi), okwenza kube iphrothokholi yokuhweba ehlukaniselwe indawo edumile. Okuzenzakalelayo...
Thola okwakamuva Klever Izindaba ebhokisini lakho lemeyiliBe Klever, ube ngowokuqala ukwazi
Imeyili yakho Imeyili yakho